Iyo # 1 Reason Makambani Anotadza paKutsvaga Injini Kugonesa | Martech Zone
Kana paine chinhu chimwe chinonditsamwisa kana zvasvika Search Engine Optimization, ndipo kana mumwe munhu akasundira kumashure kurwisa kana shanduko yesaiti nekuti ivo verenga chimwe chinhu kumwe kunhu. Kana yako saiti inoyamwa mumatanho uye iwe usingakwanise kunatsiridza masiteki, iwe unofanirwa kukwidzirisa. Kusiya saiti chinzvimbo nekuti iwe verenga chimwe chinhu kumwe kunhu inokuwanira iwo iwo chaiwo mhedzisiro iwe unayo izvozvi… hapana.
Iyo # 1 chikonzero makambani anokundikana pakutsvaga injini yekugadzirisa nekuda kweiyo verenga chimwe chinhu kumwe kunhu pembedzo yekusaita. Panzvimbo pekushandisa zviwanikwa mukusimudzira uye kuyedza, mumwe mugadziri akagara mukamuri rekuseri achitsvaga maforamu eGoogle kudzivirira chivimbo chake chekuti haafanire kukwidzirisa saiti. Hazvina musoro.
Chiito, maitiro, kana nzira yekugadzira chimwe chinhu (sekugadzira, maitiro, kana sarudzo) seyakakwana zvakakwana, inoshanda, kana inoshanda sezvinobvira; kunyanya: masvomhu maitiro (sekutsvaga kwakanyanya kwebasa) rinobatanidzwa mune izvi. Merriam-Webster Duramazwi
Majini ekutsvaga haana mitemo kana cheki yekutarisa kuti yako saiti inomira zvakanaka. Chikwata kuGoogle chakapa zvimwe zvekutanga zvinhu zvaunogona kuita pamwe nezvimwe zvishandiso zvekutarisa kubudirira kwako. Vachakuudza kuti uve nechokwadi chekuti saiti yako iri nhare, ita shuwa kuti iri kukurumidza, ita shuwa kuti hausi kuvharisa injini dzekutsvaga… , alt tags, HTML mamiriro, pinging, keyword kushandiswa, hutungamiri, nezvimwe…
Asi ivo havakuudze zvese zvaunofanirwa kuita, ivo vanongokuraira iwe kuti ushandise yako saiti. Nekudaro, zviri kwauri kuti uedze kushandiswa kwemifananidzo, kushandiswa kwevhidhiyo, chimiro chesaiti, kufamba, nezvimwe. Kuti uwane optimize, zvinoda kuti iwe:
Act - zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuita chimwe chinhu!
bvunzo - izvo zvinoreva kuti iwe unogadzira nzira kana maitiro ekuyedza shanduko.
Nhamba - izvo zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuyera mhedzisiro yeshanduko dzauri kuita kune ino saiti kuti iwe ugone kuudza zvinoshanda uye zvisingashande.
Verenga Chimwe Chinhu Pane Imwe Nzvimbo
Kune akatiwandei matambudziko neiyo verenga chimwe chinhu kumwe kunhu pembedzo yekusaita:
The nguva yezano rakapihwa rinogona kunge risiri rechinyakare nemaitiro ekutsvagisa injini. Semuenzaniso, iwe unogona kuverenga chinyorwa chikuru pamusoro pekunyora… asi hachisisitsigirwi neGoogle.
The mabviro yemazano inogona kunge isingaenderane nezvakanangana nenyaya dzauri kumhanyira madziri. Zvichida kurairwa kwacho kwakapihwa kune webhusaiti saiti, kana saiti yemuno, kana saiti ine yakakwira nhare yekushandisa… iro zano rinogona kushanda kana kusashanda kana kuve pekutanga pasiti yako.
Saka… iwe wedzera. Uye kana iwe uri kushanda nefemu huru inoramba ichitevedzera nzira dzeSEO, iro basa riripo kuti uve nechokwadi chekuti hauzvikunde. Asi ivo zvakare vane ruzivo saka hapana chikonzero chekuti timu yako iende verenga chimwe chinhu kumwe kunhu.
The verenga chimwe chinhu kumwe kunhu chikonzero chinofanira kuenda. Iwe unowana mamirioni zvikonzero pawebhu zvekusaita, asi kana izvo zvawakaita zvisiri kushanda, haugone kutarisira mhedzisiro dzakasiyana kusvikira waita shanduko. Ndiyo kiyi yekugadzirisa - ramba uchiedza nzira dzakasiyana kuti ugone kuona zvinoshanda zvakanyanya. Usarase chero chinhu kunze kwekunge, semuenzaniso, Google yakapa mameseji akajeka pane zvekuita kana zvekusaita. Semuenzaniso, Google yakakuudza kuti usambobhadhara ma link. Saka usazviita.
Zvese zvimwe zvakavhurirwa optimization. Regedza kuuya nezvikonzero uye tanga kugadzirisa yako saiti izvozvi!
Tags: Ita chiito!Nhambaverenga chimwe chinhu kumwe kunhuSearch Engine Optimizationnzira dzekutsvagayekutsvaga optimization maitiroseobvunzo